Xil Fiqi: Ma dhici kartaa in warkaan baxsashada Janan loogu marmarsoonayo in la khaarajiyo? – Hornafrik Media Network
Xil Fiqi: Ma dhici kartaa in warkaan baxsashada Janan loogu marmarsoonayo in la khaarajiyo?
Durba waxaa su’aallo laga keenay fariin ay goor dhaw baahisay taliye ku xigeenka labaad ee ciidanka booliska Soomaaliya Janeraal Zakiya Xuseen, taas oo ay ku sheegtay inuu xabsiga ka baxsaday saakay wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan.
Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo ka tirsan golaha shacabka ayaa ka mid ah dadka su’aalaha ka keenay fariinta booliska, waxuuna soo bandhigay illaa seddax su’aalood oo uga soo baxday fariinta Jen. Zakiya.
Hoos ka akhriso qormada Xildhibaan Fiqi:
Taliska Booliska oo shaaciyey in wasiirkii amniga Jubbaland C/rashiid Janan uu xabsiga ka baxsaday